फोनबाट धम्की दिए १५ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैद ! - Tech News Nepal Tech News Nepal
बिहीबार, आश्विन २९, २०७७ १२:०२
फोनबाट धम्की दिए १५ लाख जरिवाना र १ वर्ष कैद !
संसदको आगामी अधिवेशनबाट दूरसञ्चार ऐनले अन्तिम रुप पाउनेछ । विधेयकको परिच्छेद १२ मा कसूर, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार दूरसञ्चार सेवा (फोन तथा अनलाइन) बाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिने कार्य गरेमा दूरसञ्चार ऐनअनुसार कसूर गरेको मानिनेछ । जसमा सजाय स्वरुप दश लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।